venturi ပြွန်နှင့်အတူမြင့်မားသောအပူချိန်အရိုးစု China Manufacturer
Venturi Tube နှင့်အတူလေ့လာကြရအောင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး,Venturi Tube နှင့်အတူ Organosilicon မူဘောင်,Venturi Tube နှင့်အတူသံမဏိလေ့လာကြရအောင်
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer Main Mark: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: Venturi Tube နှင့်အတူလေ့လာကြရအောင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး,Venturi Tube နှင့်အတူ Organosilicon မူဘောင်,Venturi Tube နှင့်အတူသံမဏိလေ့လာကြရအောင်
Home > ထုတ်ကုန်များ > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Fittings > ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေး Bag ကေ့ > venturi ပြွန်နှင့်အတူမြင့်မားသောအပူချိန်အရိုးစု
 venturi ပြွန်နှင့်အတူမြင့်မားသောအပူချိန်အရိုးစု
(1) မြေမှုန့်စုဆောင်းအရိုးစုကွင်းနှင့် longitudinal အရက်ဆိုင် supporting ၏ယူနီဖောင်းဖြန့်ဖြူးရန်လိုအပ်ပါသည်။
(2) Brace လက်စွပ်နှင့် longitudinal အားဖြည့်အလုံအလောက်အစွမ်းသတ္တိ, တောင့်တင်းရှိသင့်သည်။
(3) က filter ကိုအိတ်နှင့်စစ်ထုတ်ကိရိယာများအတွက်ဓာတ်ငွေ့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဖိအားကိုဆီးတားနိုင်။
2, ထိုကျူပင်ဘောင်အလုံအလောက်စက်ဝိုင်းနှင့် elasticity ရှိသင့်, နှင့်အကွာကိုတောင်ဆွဲနောက်မှာဖြစ်သင့်ပါတယ်။
3. မြေမှုန့်စုဆောင်းအရိုးစုအားလုံးသည်ဂဟေအချက်များခိုင်ခိုင်ခံ့ခံ့ welded ရလိမ့်မည်နှင့်မျှမတို့ခွင့်ပြုထားဂဟေဆော်, ပျက်ပြယ်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပျောက်ဆုံးဂဟေရှိသေး၏။
4. မြေမှုန့်စုဆောင်းအရိုးစုနှင့် filter ကိုအိတ်၏မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ချောမွေ့မရှိ, ဂဟေဆော်အမာရွတ်, မညီမညာဖြစ်နေသောနှင့် burr ဖြစ်သင့်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။
5. မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အရိုးစု၏မျက်နှာပြင်ပက်ဖြန်းသို့မဟုတ်ပန်းချီထိုကဲ့သို့သောအမြင့်ဆုံးအပူချိန်အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်, အညီ, နှင့်၎င်း၏ချေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအသုံးပြုမှုအပူချိန်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသင့်တယ်, anticorrosion, electroplating ခြင်းဖြင့်ကုသရမည်ဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: Venturi Tube နှင့်အတူလေ့လာကြရအောင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , Venturi Tube နှင့်အတူ Organosilicon မူဘောင် , Venturi Tube နှင့်အတူသံမဏိလေ့လာကြရအောင် , သံမဏိလေ့လာကြရအောင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , flat Bag လေ့လာကြရအောင်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , အိတ်များအတွက်အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Venturi Tube , စက်မှု Bag ကေ့အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး , သံမဏိပြားလေ့လာကြရအောင်၏ဈေးနှုန်း